EDBM SY NY AXIAN GROUPE : MISOKATRA NY FIFANINANA HO FAMPIASANA NY VOKATRA TEKNOLOJIA VAOVAO
On sept 18, 2018 25 935
Tsy afa – misaraka eo amin’ny fampandrosoana ny firenena iray ny sehatry ny fambolena sy fiompiana, ary ny Teknolojia. Maro amin’ny tanora Malagasy no efa mahafehy tanteraka ity farany. Ny tantsaha rahateo, miditra amin’ny ara-dalana mba itadiavany lalam- barotra ambonimbony kokoa.
Mba hampifandray ireo sehatra roa ireo no nisian’ny EDBM (Economic Development Board of Madagascar ), masoivoho ofisialy ho fampiroboroboana ny fampiasam- bola eto Madagasikara.
Hisintonana ny mpampiasa vola anefa, ilaina ny toro- lalana ara- teknolojia hafahan’ny mpampiasa vola misafidy ny vokatra tian’izy ireo ampiasana ny volany. Nanomboka ny 14 Septambra lasa teo ny fisokafan’ny fifaninana ny fikirakirana ny teknolojia vaovao hoentina hampiroboroboana ny fambolena sy fiompiana teny amin’ny Foara iraisam- pirenena momba fambolena.
Ny 15 Oktobra 2018 no fampafantarana izay nisoratra anarana ny tetikasany araka fanazavana nomen-dRatoa Carole Rakotondrainibe, tomponandraikitra eo anivon’ny Axian.
Ny loka azo dia ny fanampian’ny EDBM sy AXIAN fampiroboroboana ny terikasa, amin’ny alalan’ny fikirakirana ny teknolojia vaovao ho fampivoarana ny fambolena eto Madagasikara.
Nampirisika ny tanora mba handray anjara ny Tale Jeneraly ny EDBM Andry Tiana Ravalimanda, izay tsy ho tombony ho an’ny mpikirakira ny teknolojia ihany, fa indrindra ny sehatry ny fambolena sy ny fampiasan’ny mpampiasa vola eto Madagasikara sy ny any ivelany. Tanjona rahateo ny hatongavan’i Madagasikara ho sompitra aty amin’ny ranomasinabe indiana.
ORINASA CHOCOLAIT : TSY MANAFATRA RONONO ANY IVELANY INTSONY